हेर्दा हेर्दै सुनको भाउ अब पुरानो मुल्यतर्फ फर्किदै, आपूर्ति बढ्ने, मूल्य अझै घट्ने – AB Sansar
November 2, 2020 adminLeaveaComment on हेर्दा हेर्दै सुनको भाउ अब पुरानो मुल्यतर्फ फर्किदै, आपूर्ति बढ्ने, मूल्य अझै घट्ने
काठमाडौँ,। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य घट्ने क्रम सुरु भएको छ । शुक्रबारको तुलानामा आइतबार प्रतितोला ९२ हजार ३ सय कायम भएको सुनको मूल्यमा अझै कमी आउने भएको छ । ‘एनआईसी, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, माछापुच्छ«े र एनएमबी बैंकले मगाएको ३ सय किलो सुन आउँदो सातासम्म आउने भएको छ । त्यसपछिको २० दिनको लागि सुनको सहज आपूर्ति भई मूल्य केही घट्नेछ’। ****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने । राष्ट्र बैंकले आयात अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेका बताउँदै चैत्र १ गतेदेखि सुनको आयातमा रोक लगाएको थियो । उसले चैत २० गतेदेखि बैंकर्स एसोसिएसनको सिफारिसमा वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्र सुन आयातको अनुमति खुला गरेको थियो।
साथै, सुनको भन्सार प्रति १० ग्राम १३० रुपैयाँबाट बढाएर ४७० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । त्योअनुसार एसोसिएसनले अघिल्लो साता उल्लेखित बैंकहरूलाई २० दिनको लागि सुन आयात गर्न दिन राष्ट्र बैंकसँग सिफारिस गरेको छ । त्यो सुन आएपछि वैशाखभरको माग धान्नेछ । तर, जेठमा फेरि सुनको अभाव हुने र मूल्य पनि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा विवाहको लगन भएको महिना र चाडपर्वको समयमा दैनिक ३० किलो सुन खपत हुने गरेको छ । अरू बाँकी करिब १० किलो सुन खपत हुन्छ । राष्ट्र बैंकले दैनिक १० किलो मात्र सुन आयात गर्न दिने निर्णय गरेकोले सुन अभाव दीर्घकालसम्म हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ । ****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
दुखद खबर: साथीसंग खेलीरहेका ९ वर्षका रघुवीरको टि”परले लियो ज्या’न !
महिलाहरूको यस्तो इच्छा जुन हरेक पुरुषलाई थाहा नै हुदैन ।
लाखौ पुगेको सुनको मूल्य दशैको मुखैमा आज सोच्नै नसकिने यस्तो भयो !
तिहार पछि आज पत्याउनै नसकीने गरि घट्यो सुनको मुल्य !